Thwebula RogueKiller 11.0.8 – Vessoft
RogueKiller – a software ukuthola nokususa izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe kwenza ukuhlanza system yakho kusuka ku-malware, amagciwane, izibungu, trojans kanye nezinye izingozi. RogueKiller aqalaze izinqubo, ebhukwini okufakiwe, amafolda futhi likuvumela ukususa noma ukubika izinsongo. Isofthiwe kuthola kufakwe wabashayeli system noma DLL-imitapo, uyalulama ifayela Sebawoti, DNS, proxy ukuthi zashintshwa malware ehlukahlukene. RogueKiller ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ithola nokususa izinsongo ehlukahlukene
Iskena izinqubo, lokubhalisa okufakiwe namafolda
Ubuyisela ifayela Sebawoti
Amazwana on RogueKiller:
RogueKiller Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, 中文... Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet futhi Firewall
Antiviruses Isofthiwe umnyuziki unqulo wesi arab kusukela Microsoft. Antivirus ivikela uhlelo ngokumelene amagciwane of izinhlobo ezahlukene, spyware kanye nezinye izingozi.
English, Українська, Français, Español... AIMP 4.13.1887